Nepal: Samy Manana Ny Androny, Antsoina Hoe “Kukur Tihar”, Ny Alika Tsirairay Avy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2017 20:24 GMT
Vakio amin'ny teny Français, اردو, русский, Español, 日本語, Italiano, 繁體中文, English
Antsoina hoe Kukur Tihar izy io ary andro faharoa amin'ny fety maharitra dimy andro antsoina hoe Tihar, izay ankalazaina miaraka amin'ny jiro sy tsipoapoaka, mitovy amin'ireo fomban'ny Diwali any Inde sy any an-kafa. Mandritra ny Kukur Tihar, toloran’ny olona fehiloha, tika (teboka mena) sy karazan-tsakafo toy ny ronono, atody, hena, na karazan-tsakafo tsara kalitao na ho an'ny alika an-trano na ho an'ny alika mpirenireny.
Antsoina hoe “malla” ilay fehiloha, ary manindrahindra ny fiderana sy fahamendrehana izany. Manambara izay misalotra azy io ho fananana iankinana aman’aina izany ary maneho ny vavaka ampiarahana amin'ilay alika. Ny tika dia manome toetra masina an’ilay alika ary miasa ho fitahiana ho an'ireo olona mifanena aminy amin'ity andro fitahiana ity.
Manazava i Pradeep Singh ao amin'ny bilaoginy:
Ankalazain'ny fianakaviako (@ dahalalish @ kellyjellymua) ny Diwali – indrindra ny Kukur Tihar miaraka amin'ny zanakalikan'ny ray tampo amiko, Pepper!